Dina (zanak'i Jakôba) - Wikipedia
Dina (zanak'i Jakôba)
I Dina (hebreo: דינה ) dia zanakavavin'i Jakoba tamin'i Lea araka ny Bokin'ny Genesisy ao amin'ny Baiboly.
Niverina any amin'ny tany Kanana niaraka amin'ny vady aman-janany i Jakoba rehefa avy nandany taona maro tao amin'i Labana rafozany. Nividy tany tao amin'ny faritr'i Sikema na Sekema izy honenany (Gen. 33.19). Hitan'i Sekema zanakalahin'ny lehiben'io tanàna io ny hatsaran-tarehn'i Dina ka nalainy an-keriny sy naolany ity zazavavy ity. Raiki-pitia tamin'i Dina izay nampitoeriny tao aminy izy ka niteny tamin-drainy mba hangataka azy ho vady tany amin'i Jakoba.
Nankany amin'i Jakoba sy ireo zananilahy izay tezitra mafy i Hamora rain'i Sekema mba hangataka azy ho vadin-janany sy hanao fanekem-pihavanana aminy. Nitaky ny hanaovana famoràna ny lehilehy rehetra tao Sikema ireo zanak'i Jakoba mba hanatanterahana izany fanekem-pihavanana izany. Nanaiky an'izany i Hamora sy i Sekema ka noforana avokoa ny lehilahy rehetra tao an-tanànany. Kanjo raha mbola tsy sitrana ny fery tamin'ny andro fahatelo dia tonga tany Sikema i Simeona sy i Levy ka namono ny lehilahy tao tamin'ny sabatra sy nandroba ny tanàna ary nitondra an'i Dina nody.
Tsy nahafaly an'i Jakoba izany zavatra nitranga izany ka niala ilay toerana nonenany izy sy ireo vady aman-janany mba tsy hiharan'ny valifaty. Nankany amin'i Josefa any Ejipta i Dina sy ny fianakavin'i Jakoba rehetra taty aoriana. Tamin'ny nanomezan'i Jakoba tsodrano farany ireo zanany alohan'ny hahafatesany dia mbola nampahatsiahivin'i Jakoba an'ireo zananay roalahy ny zavatra nataony.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Dina_(zanak%27i_Jakôba)&oldid=980617"
Voaova farany tamin'ny 3 Martsa 2020 amin'ny 10:12 ity pejy ity.